Rabshado ka dhacay Boorama - BBC News Somali
Rabshado ka dhacay Boorama
Image caption Magaalada Boorama
Magaalada Borama ilaa shan qof ayaa boliisku xidheen kadib banaanbaxyo shalay iyo maanta ka dhacay magaalada oo lagaga cabanayo saamiga gobolkaasi Awdal uu ka helay xubnaha wasiirada cusub ee xukuumada Madaxweyne Siilanyo.
Ciidamo police ah oo ka tegay magaalada hargeysa ayaa ayaa la geeyay maanta magaalada Boorama. Guddoomiyihii Gobolka Awdal Maxamuud Sh. Cabdillahi Cige ayaa galabta shir jaraa,id oo uu ku qabtay Boorama kaga dhawaaqay inuu xilkii iska casilay.
Wuxuuna BBC u sheegay in ciidamada la keenay Boorama ay u sheegeen inay amar ku qabaan inaanay ka amar qaadan guddoomiyaha gobolka iyo taliyaha qaybta boliiska ee gobolka Awdal midna, taasoo uu sheegay inay ka baxsantahay nidaamka dawladnimo.